Warshadda gawaarida qaada 33 mitir Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Changyuan
bambo gacmeedka la taaban karo ee loo yaqaan 'pump bambo pump', oo sidoo kale loo yaqaanno bamgareynta mashiinka mashiinka ee loo yaqaan 'pump pump pump, pump pump pump', ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa in lagu meeleeyo la taaban karo meelaha adag-si loo gaaro si sax ah iyada oo gacanta lagu hayo gacanta robotic (koombo) oo saaran dusha gaariga. Gawaarida korantada ee la taaban karo ayaa ah mashiinka la taaban karo ee ku habboon in lagu gudbiyo culus, viscous, baabi'inta iyo jaranjarada isku dhafka ah ee la socota tuubbada dareeraha illaa masaafo dheer oo leh deg deg ah, tayo sare leh, kor u qaad heer sare ah. Waxay soo bandhigtay waxqabad heer sare ah, deg deg ah, kaydinta shaqaalaha, gudbinta siman taas oo lagama maarmaan u ah mashaariicda dhismaha.
Tilmaamaha bamamka la taaban karo ee bamka:
1. Naqshadaynta moodada ah, waxqabadka sareeya
2. Dejinta deg deg ah, hufnaan sare, kor u qaad heer sare ah.
3. Waxa la hagaajiyay qaab farshaxaneedka gacanta robotic (boombolodh) qaab hawleed dabacsan.
4. Nidaamka saliidaha ee otomaatiga ah iyo degdegga ah.
5. Meel ballaadhan oo ah biibiile weyn oo la qaadi karo.
6. Noocyo tayo sare leh oo caan ka ah dareerayaasha iyo walxaha saliida.
7. Nidaamka xakamaynta sirdoonka.
8. Qiimaha warshadda Tartanka.
9. Adeeg tayo wanaagsan, oo waxay kuu oggolaaneysaa dejinta fudud iyo hawl ka sii fudud.
10. Nooca ugu dambeeya ee shaashaddu waa isbadal cusub oo dhinaca gudaha ah, heerka nuugista ayaa sare u kacay 20%, ma jiraan waxyaabo ku dhejinaya, oo si fudud loo nadiifin karo.
11. Gawaarida waaweyn ee bamka xamuulka qaada ee 33m bam-gacmeedyo waaweyn oo matoorro ah oo matoorro weyn leh ayaa waxay ridayaan matoor kuleyliya si ay u hubiyaan nadaamka mid deggan oo la isku halleyn karo, oo leh hawlo badan oo buux-dhaaf ah iyo buux-dhaaf ah si wax ku ool ah u soo baxa matoorka saliidda iyo naaftada naaftada.
Annaga oo ah soosaaraha mashiinka matoorka jilicsan ee wax soo saarta iyo dhoofinta, waxaa naga go'naa bixinta hal xabbad joojineed oo la taaban karo u leh macaamiisha adduunka in kabadan 20 sano. Waxaan haysanaa in kabadan 150 shaqaale xirfadlayaal ah iyo 21,000 mitir murabac laba jibaaran oo ku qalabeysan mashiinnada wax lagu farsameeyo ee casriga ah sida mashiinka goynta birta, shan makiinad caajis iyo mashiin bir tuurista, mashiinka foorarsiga tooska ah, mashiinka dhogorta birta, mashiinka alxanka. iyo agabyada kale ee xirfadeed, iwm, kuwaas oo naga caawiya sidii loo ilaalin lahaa tayada badeecad sarre, waqti gaarsiisan oo gaagaaban iyo kharash la tartami kara si aan u buuxinno shuruudaha macaamiisheenna adduunka.
Isku darida gawaarida matoorka
Qalabka paramet-ers dhererka buuxa 10650mm Nidaamka 'pumpi-ng param-eters' Moodhadhka Isku Darka JS500 / JS750
Dhererka guud 3720mm Barakaca la taaban karo ee la taaban karo 25 / 35m3/ h
Dhererka guud 2350mm Foomka waalka qaybinta S valve
Miisaanka qofka 22600Kg Gudbinta dhululubo dhexroor ah / garaac 230 / 1600mm
Moodhiska 'Chassis' Dongfeng Barokaca matoorka saliida 190ml / r
Qaabka wadista 4 × 2 Dhexroor gudaha ah ee tuubbooyinka gudbinta 125mm
nooca mashiinka Yuchai Isku darka guud ee ugu badan 40mm
Awoodda soosaarka / xawaaraha 177 / 199Kw / 2300RPM Isku-darka sibidhka 160-220mm
Heerarka Emission Wadan V Nidaamka cadaadiska saliida 31.5MPa
Cabbirka taayirrada 11.00R20 Mugga haanta saliida 500L
Wheelbase 5200 / 5000mm Nooca nidaamka hydraulic Furan
Dhumuc toosan 33m Wareega korantada sare iyo mid hooseeya Beddelka otomaatigga
Dhererka toosan siman 29.2m Qaboojinta saliida dareeraha Hawo qaboojiye
Qoto dheer oo toosan 17.6m Habka nadiifinta biibiile Dhaq
Foom isku laabma 4R Habka saliidaha Saliid dhexe oo dhexe
Bamka saliida weyn Jarmalka Rexroth
Geeska 90o Bamka bullaacadda Jarmalka Rexroth
dherer 7050mm Bamka cadaadiska joogtada ah Jarmalka Rexroth
Geeska 180 o Bamka matoorka Jarmalka Rexroth
dherer 7050mm Fallaadhiisu badanyihiin Harvey, Jarmalka
Geeska 180 o Miisaan dheelitirka korantada Rexroth Jarmal / HBS
dherer 7200mm Manifold Eaton ， USA
Geeska 212o Sheet bir ah Waxaa laga keenay Sweden / Baosteel
Jooji gudbinta tuubada dherer 3m Kontoroolka fog HBC / ohm, iwm.
Xaggo wareejin kara ± 360 o Qalabka korantada Qalabka korantada
Ballaca hore ee hore 5800mm
Dib u ballac ballaadhka ballaadhka 8350mm
Masaafada dhererka dheer ee lugaha hore iyo dambe 6800mm
Lugta hore Nooca X
Hore: 33 mitir isku-dhafka gawaarida matoorka
Xiga: 37 mitir bir-buundo kaliya ah